ch2လုကာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch2လုကာ
2:3 And all went to be declared, မိမိမွို့မှအသီးအသီး.
2:6 ထိုအခါကြောင့်ဖြစ်ပျက်, while they were there, the days were completed, so that she would give birth.
2:9 ထိုအခါ, an Angel of the Lord stood near them, and the brightness of God shone around them, and they were struck withagreat fear.
2:10 And the Angel said to them: "မကြောက်ပါနဲ့. အကြောင်းမူကား,, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, I proclaim to youagreat joy, which will be for all the people.
2:15 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, ကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်သို့သူတို့ထံမှထွက်သွားကြပြီးမှ, သိုးထိန်းတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်ကပြောပါတယ်, "ကျွန်တော်တို့ကိုဗက်လင်မြို့သို့ကူးနှင့်ဤစကားလုံးကြည့်ရအောင်, အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့, သောသခင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်။ "
2:16 ထိုသူတို့ကလျင်မြန်စွာသွား၏. ထိုသူတို့ကားမာရိနှင့်ယောသပ်ကိုတွေ့; နှင့်မွေးကင်းစကလေးတစ်ဦးနွားစားခွက်ထဲမှာမုသာစကားကိုခဲ့သည်.
2:17 ထိုအခါ, ဒီကိုမြင်လျှင်အပေါ်သို့, သူတို့ကဒီကောင်လေးအကြောင်းကိုသူတို့ကိုပြောပြီခဲ့သောစကားလုံးနားလည်သဘောပေါက်.
2:18 ထိုသို့ကြားသိသောသူအပေါင်းတို့သည်ဤအားဖြင့်အံ့သြခဲ့ကြ, နှင့်သိုးထိန်းများကသူတို့ကိုပြောတယ်သောအမှုအရာအားဖြင့်.
2:19 မာရိသညျဤစကားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်, သူမ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ထိုသူတို့ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်.
2:20 ထိုအခါအချင်းသိုးထိန်းပြန်ရောက်, သူတို့ကြားမြင်ဘူးသမျှသောအမှုအရာအဘို့ဘုရားသခင့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းနှင့်ကိုခြီးမှမျး, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအားကြားပြောလေ၏နည်းတူ.
2:21 ရှစ်ရက်အကြာမှာအဆုံးသတ်ခဲ့သည်, ကောင်လေးကရေဖျားလှီးခြင်းကိုမည်ဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာ, သူ၏နာမယရှေုကိုခေါ်ခဲ့သည်, သူသည်အမိဝမ်းထဲမှာပဋိသန္ဓေယူမီသူကအိန်ဂျယ်ဖြင့်သင့်ကိုခေါ်ခဲ့သည်နည်းတူ.
2:22 နှင့်သူမ၏သန့်စင်၏ရက်အကြာမှာပွညျ့စုံခဲ့, မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်းနှင့်အညီ, သူတို့ဂျေရုဆလင်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏, သခင်ဘုရားသည်သူ့ကိုဆက်သနိုင်ရန်အတွက်,
2:23 ဒါကြောင့်သခင်ဘုရား၏ပညတ္တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားနည်းတူ, "အမိဝမ်းမဖွင့်ယောက်ျားရှိသမျှသခင်ဘုရားအဘို့သန့်ရှင်းဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်,"
2:24 ကာယဇ်ပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်, သခင်ဘုရား၏ပညတ်တရားကိုပြောပါတယ်သည်နှင့်အညီ, "ချိုးငှက်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးနုပျိုခိုတရံ။ "
2:25 ထိုအခါ, ဂျေရုဆလင်တစ်ဦးတယောက်ရှိ၏, အဘယ်သူ၏နာမကိုအမှီရှိမောင်ခဲ့သည်, နှင့်ဤသူသည်ပဲကြီးဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့, ဣသရေလအမျိုး၏သက်သာစောင့်ဆိုင်း. နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူနှင့်အတူရှိ.
2:26 ထိုမင်းသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ထဲကနေအဖြေတစ်ခုလက်ခံရရှိခဲ့: သူသည်သခင်ဘုရား၏ခရစ်တော်ကိုမမြင်မှီမိမိသေခြင်းမမြင်ရမယ်လို့.
2:27 ထိုမင်းသည်ဗိမာန်တော်ဝိညာဉျတျောနှငျ့အတူကွှ. သူငယ်ယေရှုဟာသူ့မိဘများအားဖြင့်ယူဆောင်သောအခါ, ပညတ်တရား၏အထုံးစံအတိုငျးကသူ့ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ,
2:28 သူလည်းသူ့ကိုချီ, လက်သို့, သူသညျဘုရားသခငျကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်ကပြောပါတယ်:
2:29 "အခုသငျသညျငွိမျဝကိုယ်တော်၏ကျွန်ပယ်ချစေခြင်းငှါ, အိုထာဝရဘုရား, သင့်ရဲ့စကားလုံးအရသိရသည်.
2:32 အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်မှဗျာဒိတ်တော်နှင့်သင့်လူမျိုး၏ဘုန်းအသရေဣသရေလအမျိုး၏အလင်း။ "
2:33 နှင့်သူ၏ဖခင်နှင့်မိခင်ကဤအမှုအရာကျော်အံ့သြခဲ့ကြ, သူ့ကိုအကြောင်းကိုပြောပြီခဲ့ပြီးသော.
2:34 ထိုအရှိမောင်ကသူတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, သူမယ်တော်မာရိကလည်း,: "အကယ်, ဒီတပျက်စီးခြင်းအဘို့နှင့်ဣသရေလအမျိုး၌လူအမြား၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဘို့သတ်မှတ်ပြီးပါပြီ, နှင့်ငြင်းခုံခြင်းကိုခံရလတံ့သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်.
2:35 ထိုအထားကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖြတ်သန်းပါလိမ့်မယ်, အများအပြားစိတ်နှလုံးအကြံအစည်ထင်ရှားစေခြင်းငှါဤမျှ။ "
2:36 ထိုအခါပရောဖကျမရှိ၏, အန္န, Phanuel ၏သမီး, အာရှာခရိုင်ထဲက. သူမသည်နှစ်ပေါင်းအတွက်အလွန်အဆင့်မြင့်ခဲ့သည်, နှင့်သူမ၏အပျိုစင်ကနေခုနစျနှများအတွက်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ဖူး.
2:37 ပြီးတော့သူမတစ်ဦးမုဆိုးမခဲ့သည်, ပင်သူမ၏ရှစ်ဆယ်-စတုတ္ထနှစ်တွင်မှ. ထိုအခါဗိမာန်တော်ထဲကထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ, သူမအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းမှကျွန်ခဲ့သည်, နေ့ညဉ့်.
2:38 ထိုနာရီမှာဝင်ရောက်, သူမထာဝရဘုရားအားဝန်ခံ. ထိုမိန်းမသည်ဣသရေလအမျိုး၏ရွေးနှုတ်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြသူအပေါင်းတို့သည်သူ့ကိုအကွောငျးပွော.
2:39 ထိုသူတို့က, သခင်ဘုရား၏ပညတ်တရားအတိုင်းခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖျော်ဖြေပြီးမှ, ဂါလိလဲပွညျသို့ပွနျသှား, သူတို့ရဲ့မြို့မှ, နာဇရက်မြို့သား.
2:40 အခုကလေးကကြီးပြင်း, သူသည်ပညာ၏ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အတူခိုင်ခံ့စေ၏ခဲ့သည်. တဖန်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သူ့ကို၌ရှိ၏.
2:44 ဒါပေမယ့်, supposing that he was in the company, they wentaday’s journey, seeking him among their relatives and acquaintances.
2:46 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, သုံးရက်အကြာမှာ, they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, listening to them and questioning them.
2:48 သူ့ကိုကိုမြင်လျှင်အပေါ်သို့, they wondered. မယ်တော်ကလညျး: "သားတော်သည်, why have you acted this way toward us? အကယ်, your father and I were seeking you in sorrow.”
2:49 ထိုသူတို့အားဆို၏: “How is it that you were seeking me? For did you not know that it is necessary for me to be in these things which are of my Father?"